Abavelisi bomatshini weqhwa elengca - iTshayina Umatshini wokwenza uMkhenkce ababoneleli kunye nefektri
IFlake Ice Evaporator
Elona candelo liphambili le-evaporator yomkhenkce wethu lisebenza ngokukuko kukuqhutywa kobushushu. Ngomthwalo okhanyayo we-screw blade, kufanelekile ngokukodwa ekwenzeni i-ice flake engenamandla kunye ne-powder, engafanelekanga ukudibanisa kwaye ingabuyiselwa ixesha elide.
Umatshini oMtsha waManzi weFlake yoMhlaba
U-Snowman uza nohlu olubanzi lwamanzi oomatshini beqhwa bamanzi aphuma kwimveliso yemihla ngemihla ukusuka kwi-0.5 yeetoni ukuya kwiitoni ezingama-20. Siphinde sibonelele ngomatshini weqhwa lamanzi olwandle kwiimfuno zakho.
Umthamo womkhenkce (Ngosuku ngalunye):500kg-60,000kg
Ulwandle Amanzi iflake Ice Machine ngenqanawa
Ngokwemigangatho yokuhlelwa koluntu, umatshini wethu womkhenkce wamanzi olwandle wenqanawa wenzelwe ngokukodwa ukwenza umkhenkce waselwandle. Ngepropathi yokulwa umhlwa, isebenzisa amanzi olwandle ngokuthe ngqo ukwenza umkhenkce kwaye ke sisixhobo esifanelekileyo sokuloba elwandle.
ICandelo leMatshini yokuTyibilika kuMkhenkce
ICandelo leMitshini yeFlake enomatshini obalekayo inokusebenza ngaphezulu kweeyure ezingama-26,000 ngaphandle kokungaphumeleli kwaye ivelise umkhenkce ongaphezulu. Imveliso yethu isebenzisa uyilo lweemodyuli, ukubanakho ukufaka kwisitya. ICandelo lethu leMatshini yokuTyibilika kuMkhenkce lisetyenziswa kakhulu ekupholiseni ikhonkrithi, iidyestuff, ukuveliswa kweemveliso zasemanzini, ulondolozo lwaselwandle kunye namanye amasimi.